FAQs - Linyi Yilibao Household Iimveliso Co., Ltd.
Singo umenzi, umzi-mveliso wethu ubekwe kwisiXeko saseLinyi, kwiPhondo laseShandong, China. Kwaye sivelisa iimveliso zasekhaya ngaphezulu kweminyaka elishumi. Umzi mveliso wethu uneziqinisekiso ze-ISO9001.
2.Ngaba ungandithumelela iSampulu ngaphambi kokuba ndibeke iodolo?
Ukuba ufuna isampulu ukujonga umgangatho kunye nezinto, ndicebisa ukuba usebenzise isampulu encinci, yinxalenye yemveliso enye epheleleyo. KwayeIsampulu encinci isimahla, kufuneka nje hlawula iindleko zokuhanjiswa.
3. Liliphi ixesha lokusiwa?
Kuxhomekeke kubungakanani beodolo yakho. Ukuba inani elincinci, ngesiqhelo kwiintsuku ezisi-7 emva kokufumana intlawulo. Ukuba ubungakanani beodolo enkulu, nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane ixesha lokuvelisa.
4. Lithini ixesha lakho lokuhlawula?
T / T; Ukuba ubungakanani encinci, 100% intlawulo ngu T / T. Ukuba ubungakanani obukhulu, ungahlawula i-30% yedipozithi ngo-T / T, i-70% eseleyo ngo-T / T emva kokugqiba imveliso; Unako nokuhlawula ngendlela yakho, nceda unxibelelane nathi ngokubonisana.
5. Yintoni na ukulayisha yakho Port?
6. Kutheni ndikhetha iimveliso zakho?
singo ukuvelisa, sinokukunika ixabiso lefektri leyo cheaperKunenkampani yokurhweba. Unokuthengisa iimpahla ngokuthe ngqo kumzi-mveliso wethungaphandle komntu ophakathi, iya kukugcinela imali eninzi. Kwaye iimveliso zethu zenkampani zikumgangatho ophezulu, zilungileukuthengisa okushushu emhlabeni jikelele.